Isikhathi sokubonisa i-Starbucks 'Beetlejuice' Glow-in-the-Dark Tumbler - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Yisikhathi sokubonisa se-'Beetlejuice 'Starbucks Glow-in-the-Dark Tumbler
I-tumbler eningi kakhulu
by UTrey Hilburn III August 8, 2021
by UTrey Hilburn III August 8, 2021 40,188 ukubukwa
Isipoki esiningi kunazo zonke singene indlela yaso kumklamo ophefumulelwe we-Starbucks. Ngenkathi simatasa sihlola ukujula okungapheli kwe-Etsy, sathola i-crossover epholile kakhulu yeBeetlejuce futhi okungavumelekile I-Starbucks
Le epoxy enhle ne-vinyl tumbler ikwazi ngokuphelele ukuhlanganisa ukubukeka kwe-Starbucks design bese ifaka ilogo ne-Beetlejuice. I-tumbler iza nomdwebo omthende omnyama nomhlophe ofana nokubukeka kwesudi ejwayelekile. Indebe iphinde iqede kahle ukubukeka kwayo yonke into nge-slime ekhanyayo ebumnyameni econsela emaphethelweni.
Umculi we-Etsy uMulberryTribe unikeza le ncazelo yento esekhasini.
“Njengamanje ngishintsha lapho ngithenga khona ama-tumblers ami ukuze ubone umehluko ohlwini lwami! Ishidi lami losayizi yilokho ama-tumblers azobukeka njengamanje. Ziyizinga le-WAY elingcono. Manje zinamabhodlela avulekile futhi avalekayo okushibilika, ama-skinny kanye nezingane eziyi-12 oz eza nezimpondo zepulasitiki ezilukhuni!
Izinduku ziboshwe nge-epoxy impilo ehlala isikhathi eside. Sicela ubhale ebhokisini elithi “amanothi kumthengisi” lapho uphuma khona unamagama owafunayo ezinkomishini zakho (uma zifunwa)
Sicela uvumele okungenani amasonto ama-2 ukuthi athunyelwe, lawa ma-tumbler agqokiwe nge-epoxy evunyelwe yi-FDA.
Uma unesicelo sangokwezifiso ofuna ukwenziwa noma noma imiphi imibuzo, ngicela ungithumelele umlayezo noma udale uhlu lwangokwezifiso! ”
Ungaqonda phezulu LAPHA uku-oda okwakho uqobo.
Ucabangani nge-Starbucks ephefumulelwe i-Beetlejuce tumbler? Sazise esigabeni sokuphawula.